दुई वर्षमै विद्युत प्राधिकरण नाफामा ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
दुई वर्षमै विद्युत प्राधिकरण नाफामा !
काठमाडौँ, २९ भदौ, पछिल्लो दुई वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्न सकेको छ । लामो समय लोडसेडिङको मारमा परेका नेपाली जनतालाई लोडसेडिङ मुक्त गरेसँगै प्राधिकरणले पनि नाफा आर्जन गरेको हो ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित ‘जलविद्युत विकासका उपलब्धीहरु र देखिएका चुनौतीहरु’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले प्राधिकरण नाफामा गएको बताएका हुन् । उनले लामो समयसम्म लोडसेडिङ्गको मारमा परेको नेपाली जनतलाई लोडसेडिङ्गमुक्त गर्न सफल भएको बताउँदै घिसिङ्गले नाजुक अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले २ वर्षयता नाफामा जान सफल भएको बताए । घिसिङ्गले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा विकास र विस्तारमा विद्युत प्राधिकरण अगाडि बढेको पनि जानकारी गराए ।
घिसिङ्गले प्राधिकरणको कयौं चुनौतीहरु रहेको जनाउँदै जलविद्युत विकासका लागि डिष्ट्रिव्यूसन सिस्टम र लगानी (इन्भेष्ट) प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । यस विषयमा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले महत्वपूर्ण कार्यहरु अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए । बिजुलीका तार झर्ने कारण वर्षेनी कयौं व्यक्तिहरुको मृत्यु भइरहेकोले सुरक्षाका लागि तारका पोलहरु हटाउनेतर्फ प्राधिकरण अगाडि बढेको पनि उनले जनाए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले जलविद्युतसम्बन्धी ठुला आयोजनाहरु निर्माण लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कयौं नीतिगत कुराहरु अगाडि बढाएको जनाउँदै मन्त्री र व्यूरोक्रेसी गहन रुपले लागिरहेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयका जलविद्युत महाशाखा प्रमुख सहसचिव दिनेश घिमिरेले स्थिर सरकार भएका कारण यथार्थपरक ढङ्गबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे । उनले अब उर्जा क्षेत्रमा पनि विकासले तिव्रता पाउने धारणा राखे । सहसचिव घिमिरेले गुणस्तरीय विजुली वितरण योजनामा मन्त्रालय रहकोले बताए ।
पत्रकार तथा जलविद्युतसम्बन्धी जानकार विकास थापाले नेपालका उपल्लो तहका व्यक्तिहरु नै लाइसेन्स वितरण गरी कमिसन लिने खेलमा लागेका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकेको दाबी गरे । उनले नेपालका मन्त्री तथा उपल्लो तहका सरकारी अधिकारीहरु विदेशी कम्पनीको प्रलोभनमा परेर लाइसेन्स दिए पनि उत्पादनमा भने ध्यान दिन नसक्दा नेपालीहरु लामो समयसम्म लोडसेडिङ्गको मार खेप्नुपरेको बताए । नेपालमा रहेका जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले अब नेपालले आयात होइन निर्यात गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रम आयोजक सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले हामीसँग जलविद्युत क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै विदेशमा निर्यात गर्ने स्रोत भए पनि विविध कारणले विदेशबाट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने दयनीय अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले यस्तो समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
सो कार्यक्रममा सौर्य विद्युत उत्पादन संघका किरण गौतम र बर्मा सरकारका उर्जा सल्लाहकार मधुसुदन अधिकारीलगायतका वक्ताहरुले महत्वपूर्ण मन्तव्य राखेका थिए ।
Tagged कुलमान घिसिङ्ग विद्युत प्राधिकरण
भारतका राष्ट्रिय सल्लाहकार डोभालसँग प्रचण्डको भेट
सिसडोलबासीलाई नेविसंघको साथ
Tags: कुलमान घिसिङ्ग, विद्युत प्राधिकरण